TOP NEWS:- Farmaajo “Dagaalka Shabaab 10 sano ayaa laga yaabaa inuu nagu qaato” – XAMAR POST
TOP NEWS:- Farmaajo “Dagaalka Shabaab 10 sano ayaa laga yaabaa inuu nagu qaato”
Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed C/laahi Maxamed (Farmaajo) ayaa sheegay in muhiim ay tahay midowga Madaxda Qaranka, si looga adkaado ururka Al-shabaab oo billihii ugu dambeeyay kordhiyay weerarada ay ka geystaan Muqdisho.
Wuxuu sheegay Farmaajo in tilmaan cad ay u tahay weerarada Al-shabaab ee sii kordhaya kala qeybsanaanta siyaasadeed ee u dhaxeysa Madaxda taas oo uu sheegay in shaki ay gelin karto xilliga laga adkaan karo ururka Al-shabaab.
Farmaajo ayaa sheegay in hada uu soconayo qorshe lagu dhimayo Ciidanka AMISOM, taas bedelkeedana loo baahan yahay in la sameeyo istiraatiijiyad Millitari oo looga maarmayo AMISOM, iyo in la isku dhafo Ciidanka Qaranka.
“Qoladan Shabaabka ah sida aan uga adkaan doono magaraneyno, waliba waxaa laga yaabaa in ay nagu qaadato 10 sano oo kale, aniga waxaan aaminsanahay dagaalkan inaan soo afjari karno hadii aan wada shaqeyno oo aan dhiiragelino shacabkeena.” Ayuu yiri Madaxweynaha.
Hadalkan ayuu ka sheegay Maxamed C/laahi Maxamed (Farmaajo) Madaxweynaha Soomaaliya xilli uu xalay khudbad ka jeedinayay shirweynaha ay isgu yimaadeen Madaxda Dowladda dhexe iyo Dowlad Goboleedyada.
DEG DEG: Ciidamo heegan loo geliyay dagaalka ka dhanka ah Shabaab